Wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya oo sheegtay in doorashada koonfur Galbeed ay xiligeeda ku dhacayso. – The Voice of Northeastern Kenya
Wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya oo sheegtay in doorashada koonfur Galbeed ay xiligeeda ku dhacayso.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta dowlada Soomaaliya oo lagu daabacay warbaahinta qaranka ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed inay ku dhacdo waqtigii horay loogu asteeyay.
War-saxaafadeedka waxaa lagu yiri Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay faraysaa madaxda Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ee Soomaaliya in doorashada ay qabsoonto xilliggii loo asteeyey oo ah 17-ka November 2018ka.
Muddada xil hanyta maamulka hadda ka jira ee koofur galbeed waxay ku egtahay 17-ka November lamana aqbali doono inay dib uga dhacdo sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay ku dhiirri gelinaysaa guddoonka iyo xildhibaannada baarlamaanka Koonfur Galbeed in iyagoo gudanaaya waajibaadkooda dastuuriga ah ay si daahfuran u qabtaan doorashada waqtiga loo asteeyey ee kor ku xusan iyadoo la ilaalinayo xasiloonida iyo deganaashaha maamulka Koofur Galbeed ayay qoraalkeeda ku soo gabagabaysay wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya.
← DHAGEYSO Ciidanka AMISOM oo dad shacab ah ku dilay magaalada Muqdisho.
Warbixin lagu sheegay in la farageliyay kameeradii duubtay dilkii Khashoggi →